တြိဂံ Cone ဆူညံသံ Barrier
စနစ်ဖြစ်ပြီး Glass ကိုဆူညံသံ Barrier
သတ္တု Microporous ဆူညံသံ Barrier
acrylic Transparent ဆူညံသံ Barrier
အမြဲတမ်းဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေး Barrier PNCB
ယာယီဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေး Barrier (TNCB)
မျှော်စင် acoustic အတားအဆီးအအေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ
FRP Soundproofing ခြံစည်းရိုး LRM
မြေပေါ် Soundproofing ခြံစည်းရိုး LRM
မီးရထား acoustic အတားအဆီး
ကျောင်းစာအုပ် Soundproofing ခြံစည်းရိုး (LRM)
အဝေးပြေး acoustic အတားအဆီး
Communityfactory acoustic အတားအဆီး
လေအေးပေးစက်ယူနစ် acoustic အတားအဆီး
ရှုခင်းရောင်စုံ acoustic အတားအဆီး
Hebei အသက် 30 နှစ်ကစက်ရုံအနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှစ်ဆဝါယာကြိုးသတ္တုကွက်, 868 နှင့် 656 welded ဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြပစ္စည်းအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး: သွပ်ရည်စိမ်ပြီးနောက်, ကုန်ကြမ်းအဖြစ် welded panel ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသံလှံတံကိုသုံးပြီး Powder primer နှင့် Powder ထိပ်တန်းအပေါ်ယံပိုင်း; အလွန်ပြင်းထန်စွာတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနဲ့ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ။ အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း၏အထူအများအားဖြင့် 100-120 မိုက်ခရွန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေးခယျြဝါယာကြိုးချင်း * 1 6MM *2+ 5MM ဖြစ်ကြသည်။ * 1 8 မီလီမီတာ *2+ 6MM ။ ဒါဟာဆောက်လုပ်ရေးတှနျးလှနျဖို့မွငျ့မားခိုင်မာတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသွား။ po ...
Hebei အသက် 30 နှစ်ကစက်ရုံအနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှစ်ဆဝါယာကြိုးသတ္တုကွက်, 868 နှင့် 656 ဂဟေဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
, သွပ်ရည်စိမ်ပြီးနောက်, ကုန်ကြမ်းအဖြစ် welded panel ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသံလှံတံကိုသုံးပြီး Powder primer နှင့် Powder ထိပ်တန်းအပေါ်ယံပိုင်း; အလွန်ပြင်းထန်စွာတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနဲ့ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုတှနျးလှနျနိုငျသညျ။ အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း၏အထူအများအားဖြင့် 100-120 မိုက်ခရွန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေးခယျြဝါယာကြိုးချင်း * 1 6MM *2+ 5MM ဖြစ်ကြသည်။ * 1 8 မီလီမီတာ *2+ 6MM ။ ဒါဟာဆောက်လုပ်ရေးတှနျးလှနျဖို့မွငျ့မားခိုင်မာတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသွား။
ဒီစနစ်အများအားဖြင့်ဒါပေါ်မြင့်ခွန်အားနှင့်အတူ (50 * 50mm, 60 * 60mm), Rectangular post (။ *280 * 60 5mm, 120 * 60 * 3mm) ရင်ပြင် Post ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပလပ်စတစ်ထုပ်သို့မဟုတ်ခေါင်မိုး rainhat အတူ။ အချောမျက်နှာပြင်သာမန်အားဖြင့်သွပ်ရည်စိမ်နှင့် Powder အပေါ်ယံပိုင်း, ဒါမှမဟုတ်တနည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမြင့်၏ Post ကို
-Double ဝါယာကြိုးခြံစည်းရိုးပျှမ်းမျှ 130 မိုက်ခရွန်အထူကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့သွပ်ရည်စိမ်နှင့် polyester အပေါ်ယံပိုင်းရှိပါတယ်။
မည်သည့် Ral အရောင် -Available ။
-Standard ထွဋ် 1.03m-1.43m-2.03m ။ အမိန့်မှတက်ကအခြားအထွဋ်။
8/6/8 welded ခြံစည်းရိုး
အသေးစိတ် & Delivery အသေးစိတ်ထုပ်ပိုး
က c ။ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အဖြစ်
အမိန့်ကိုအတည်ပြု 15-20 ရက်အကြာမှာ
Hebei Jinbiao ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ Tech မှကော်ပိုရေးရှင်း, Ltd မှတရုတ်ဝါယာကြိုးကွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည့် Anping အတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုးအဖြစ် 1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကနျြးမာရေး, အပျြောအပါး, အောင်မြင်မှု, အဖြစ်မှန်, Simple, သဘောသဘာဝလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် Jinbiao ၏လက်ျာအောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှအခြေခံလိုအပ်ချက်များရှိပါသည်။
အစောပိုင်းအဆင့်တွင်, JINBIAO သာဆူးဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပို. ပို. ရထားလမ်းနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတညျဆောကျခဲ့သညျ။ ဒါကြောင့်ဒီမှာခြံစည်းရိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများကြွယ်ဝချမ်းသာလာပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, JINBIAO ခြံစည်းရိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုအောင်၏ခရီးစဉ်စတင်သည်။ 26 နှစ်ရုန်းကန်နှင့်အတူ, JINBIAO လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရယူလိုက်သည်။
-Our ရည်မှန်းချက်: ခြံစည်းရိုးစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဘုံသာယာဝအောင်မြင်ရန်ရန်။
-Our ဝိညာဉျတျော: ကနျြးမာရေး, အပျြောအပါး, အောင်မြင်မှု, အဖြစ်မှန်, Simple, သဘောသဘာဝ။
ရတာဟာအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု,7ရက်တစ်ပါတ်တချို့လူတွေကသည့်အချိန်တွင်မဆိုငျသညျအစေခံရန်မွန်-Fri 24 နာရီ, ဖုန်းဖြေပါ။
ယခင်: 358 ကလုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး
အမှုန့် coated ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး
PVC coated ဝါယာကြိုးကွက်ခြံစည်းရိုး
အရှေ့ခရိုင်, စက်မှုပန်းခြံ, Anping ကောင်တီ, Hebei ပြည်နယ်, တရုတ် (အမှတ် 27, Weier လမ်းမကြီး)